Hypertension and Drug Compliance - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
* သှေးတိုးမှ ဆေးသောကျလိုကျတယျ ဆရာမ *
ပုံမှနျ ကွားနကြေ စကားဖွဈသညျ။ ထိုသို့ကွားရတိုငျးလညျး စိုးရိမျစိတျက ပျေါစမွဲ။
သှေးတိုးရောဂါသညျ အမွဈပွတျ ပြောကျတတျပါသလား?
မပြောကျတတျပါ။ သှေးတိုးရောဂါ၏ ၈၅ရာနှုနျးသညျ အသကျကွီးလာ၍ သှေးကွောမြား တောငျ့တငျးလာရာမှ ဖွဈပျေါလာသော ရောဂါဖွဈသဖွငျ့ အသကျကွီးလာသူ တျောတျောမြားမြား သှေးတိုးလာကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အမွဈပွတျပြောကျကငျးသော သှေးတိုးဆိုသညျမှာ အခွားရောဂါကွောငျ့ သှေးတိုးနသေော ကနျြ၁၅ရာနှုနျးသော သှေးတိုးခွငျး ဖွဈပါသညျ။
အသကျကွီးသူတိုငျး သှေးပေါငျ တကျလာတတျကွသျောလညျး သတျမှတျထားသော သှေးပေါငျခြိနျမရောကျလြှငျ ဆေးသောကျရနျ မလိုပါ။ သငျ့တငျ့မြှတသော လကေ့ငျြ့ခနျးနှငျ့ အငနျလြော့စားခွငျးဖွငျ့ ထိနျးညှိနိုငျပါသညျ။
ထို အယူအဆသညျ မှားသော အယူအဆ ဖွဈသညျ။ ဆရာဝနျတဈယောကျ အနနှေငျ့ ပွောနကေစြကားတဈခှနျး ရှိပါသညျ။ သှေးကဆြေးသညျ ယနဖွေ့တျ၍ ယနအေ့ရှိနျမသပေါ။ ယနသေ့ောကျသောဆေးသညျ နကျဖွနျအထိ ပမာဏအနညျးငယျမြှ ထိနျးနိုငျသညျဖွဈရာ ဖွတျဖွတျခငျြး မသိသာပေ။ ထို့ပွငျ သှေးတိုးနှငျ့ နသေားကနြသေော လူနာမြားသညျ သှေးပေါငျ တျောရုံတကျရုံဖွငျ့ မသိကွပေ။ ၃ ၄ရကျနမှေ ဇကျကွောထိုးသဖွငျ့၊ ခေါငျးကိုကျသဖွငျ့ စသော အကွောငျးမြားဖွငျ့ သှေးကဆြေး ပွနျသောကျတတျကွသညျ။ ထိုအခါ သှေးပေါငျသညျ တကျလိုကျ ကလြိုကျဖွငျ့ သှေးကွောမြား ပိုမို ထိခိုကျတျပါသညျ။ အဓိကအားဖွငျ့ ဦးနှောကျသှေးကွောမြားနှငျ့ ကြောကျကပျသှေးကွောမြားက ထိုဒဏျကို ပိုမိုခံစားရသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သှေးကဆြေးကို ဖွတျလိုကျသောကျလိုကျ မလုပျရပါ။ လိုအပျ၍ သောကျရပွီ ဆိုပါက စှဲသောကျရသညျ။
သှေးတိုးကို သခြောမကုရငျ ဘာတှေ ဖွဈနိငျသလဲ?
သှေးတိုးကို သခြောမထိနျးပဲ ပေါ့ဆစှာ နထေိုငျပါက နှလုံးပငျပနျးသဖွငျ့ နှလုံးရောဂါ ရရှိခွငျး၊ ကြောကျကပျထိခိုကျခွငျး၊ မွငျလှာထိခိုကျကာ အမွငျအာရုံ ခြို့ယှငျးခွငျးတို့ ဖွဈပှားနိုငျသဖွငျ့ စနဈတကြ ကုသမှု ခံယူသငျ့ပါသညျ။
ဒေါကျတာ ယမငျး ဆေး ၁
* သွေးတိုးမှ ဆေးသောက်လိုက်တယ် ဆရာမ *
ပုံမှန် ကြားနေကျ စကားဖြစ်သည်။ ထိုသို့ကြားရတိုင်းလည်း စိုးရိမ်စိတ်က ပေါ်စမြဲ။
သွေးတိုးရောဂါသည် အမြစ်ပြတ် ပျောက်တတ်ပါသလား?
မပျောက်တတ်ပါ။ သွေးတိုးရောဂါ၏ ၈၅ရာနှုန်းသည် အသက်ကြီးလာ၍ သွေးကြောများ တောင့်တင်းလာရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါဖြစ်သဖြင့် အသက်ကြီးလာသူ တော်တော်များများ သွေးတိုးလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းသော သွေးတိုးဆိုသည်မှာ အခြားရောဂါကြောင့် သွေးတိုးနေသော ကျန်၁၅ရာနှုန်းသော သွေးတိုးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အသက်ကြီးသူတိုင်း သွေးပေါင် တက်လာတတ်ကြသော်လည်း သတ်မှတ်ထားသော သွေးပေါင်ချိန်မရောက်လျှင် ဆေးသောက်ရန် မလိုပါ။ သင့်တင့်မျှတသော လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အငန်လျော့စားခြင်းဖြင့် ထိန်းညှိနိုင်ပါသည်။
ထို အယူအဆသည် မှားသော အယူအဆ ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက် အနေနှင့် ပြောနေကျစကားတစ်ခွန်း ရှိပါသည်။ သွေးကျဆေးသည် ယနေ့ဖြတ်၍ ယနေ့အရှိန်မသေပါ။ ယနေ့သောက်သောဆေးသည် နက်ဖြန်အထိ ပမာဏအနည်းငယ်မျှ ထိန်းနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ဖြတ်ဖြတ်ချင်း မသိသာပေ။ ထို့ပြင် သွေးတိုးနှင့် နေသားကျနေသော လူနာများသည် သွေးပေါင် တော်ရုံတက်ရုံဖြင့် မသိကြပေ။ ၃ ၄ရက်နေမှ ဇက်ကြောထိုးသဖြင့်၊ ခေါင်းကိုက်သဖြင့် စသော အကြောင်းများဖြင့် သွေးကျဆေး ပြန်သောက်တတ်ကြသည်။ ထိုအခါ သွေးပေါင်သည် တက်လိုက် ကျလိုက်ဖြင့် သွေးကြောများ ပိုမို ထိခိုက်တ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဦးနှောက်သွေးကြောများနှင့် ကျောက်ကပ်သွေးကြောများက ထိုဒဏ်ကို ပိုမိုခံစားရသည်။ ထို့ကြောင့် သွေးကျဆေးကို ဖြတ်လိုက်သောက်လိုက် မလုပ်ရပါ။ လိုအပ်၍ သောက်ရပြီ ဆိုပါက စွဲသောက်ရသည်။
သွေးတိုးကို သေချာမကုရင် ဘာတွေ ဖြစ်နိင်သလဲ?
သွေးတိုးကို သေချာမထိန်းပဲ ပေါ့ဆစွာ နေထိုင်ပါက နှလုံးပင်ပန်းသဖြင့် နှလုံးရောဂါ ရရှိခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ခြင်း၊ မြင်လွှာထိခိုက်ကာ အမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားနိုင်သဖြင့် စနစ်တကျ ကုသမှု ခံယူသင့်ပါသည်။
ဒေါက်တာ ယမင်း ဆေး ၁